MOTHERS | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop
၎င်းသည် ချောမွေ့တောက်ပြောင်သည့် ပလပ်စတစ်နှင့် အခရိုင်းလစ်ရှေ့မီးကြီး အမျိုးအစားအား လုံးတွင် ပကတိကြည့်လင်မှုကို လျင်မြန်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရရှိစေရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းကာ ကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားသည်။ အရောင်ဝါလာခြင်းနှင့် မှိန်လာခြင်းကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးသည်။ အလွန်သေးငယ်သည့်အစင်အခြစ်များ၊ အညစ်အကြေးအကွက်များနှင့် အပြစ်အနာအဆာများကို တစ်ဆင့်တည်းနှင့် ဖယ်ရှားပေးသည်။
# 85624, 24 oz.
Mothers Professional Instant Detailer သည် ဆီလီကွန်မပါဝင်သော ဘော်ဒီရုံတွင်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ဆေးသုတ်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ မနှိုင်းယှဉ်သာသည့် ရှင်းလင်းပေါ်လွင်မှုရှိသည်။ ၎င်းဖော်မြူလာကို သီးသန့်ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူကာ clearcoat အပါအ၀င် ဆေးသားအမျိုးအစားအား လုံးတွင် အန္တရယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မည်သည့်ဘော်ဒီရုံ၌ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ကားအမျိုးအစား၏ ဆေးသားကို မဆို အလျင်မြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးပြီး တောက်ပပြောင်လက်စေသည်။
# 84532, 32 oz.
ပိုမိုတောက်ပြောင်မှုနှင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုတို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် Mothers Professional Hand Glaze ကို Foam Pad Polish နောက်တွင် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မယှဉ်သာသည့် ရှင်းလင်းပေါ်လွင်မှုမျိုး ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Hand Glaze သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဆေးသားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် စိတ် ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။